Hanti-dhowrka Qaranka oo daaha ka qaaday masuq-maasuqa Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Hanti-dhowrka Qaranka oo daaha ka qaaday masuq-maasuqa Farmaajo
Waxaa la soo saaray warbixin sanadeedka ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dawladda, taasoo ay ku xusan yihiin dhaqaale badan oo uu lunsaday hoggaanka Villa Soomaaliya sida sharci darrada ah ku fadhiya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Warbixintan oo uu soo saaray hanti dhowrka guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye, ayaa waxaa lagu soo bandhigay habkii loo maamulay dhaqaalihii sanadkii u danbeeyey u soo xarooday Wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dowladda.
Hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa tilmaamay in lacag dhan $31 milyan oo dollar ay ku fadhiyaan, qandaraasyada ay bixiyeen hay’adaha dawladda ee aan laga diiwanagelin xafiiska hanti-dhowraha.
Waxa uu intaasi ku daray kharashaadkaas intaas dhan aysan wax caddaymo ah u haynin sida ay ku baxeen 22 ka mid ah hay’adaha uu baaritaanka ku sameeyey xafiiska hanti dhowrka.
Waxa sidoo kale la lunsaday dhaqaale beesha caalamka ku taageertay Soomaaliya oo gaarayey $17 milyan oo dollar, iyadoo lacagtan ay ku dhacday akoon ka madax banaan qasnada dhexe ee dowladda, kaasoo ay sameysteen isla markaana lacagaha ku ritaan Farmaajo iyo Fahad.
Warbixinta uu hanti dhowrka guud ee qaranku soo saaray ayaa waxaa ka maqan dhaqaalihii sanadkan ka soo xarooday safaaradaha iyo xafiisyada ay Soomaaliya ku leedahay waddamada dibedda, kuwaasoo sida uu hanti dhowrku sheegay qabtay dhaqaale dhan $278,000.
Hanti dhowrka ayaa dhanka kale tibaaxay in aan la ogayn habkii ay Maamul Gobleedyada dalka ka jira iyo Gobolka Banaadir, ay u maareeyeen ama u isticmaaleen dhaqaale gaarayey $78 milyan oo ay ka heleen Dowladda dhexe.
Warbixinta ayey ku xusnayd in aan sidii la rabay loola tacaalin xanuunkii saf marka ahaa ee COVID19, iyadoo dowladdu ay hanaan qaldan ku maamushay lacagtii loogu tala galay in cudurka lagula tacaalo.